Ihlaziywe i-Master Suite kwi-❤️ yeCastro - I-Airbnb
Ihlaziywe i-Master Suite kwi-❤️ yeCastro
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguKeith
Imiswe kanye ngentla komthambo ophambili wesithili saseCastro, le ndlu imangalisayo ye-master suite ekwabelwana ngayo kwikhaya eliyi-3br/2ba ikubonelela ngokuzola emva kokuba uzele luhambo olunika umdla. Uya kuba nokufikelela ekhitshini labapheki bale mihla, ukuba akukho nanye kwindawo yokutyela emnandi ekufutshane eyenza umdla wakho, kunye newasha/isomisi esipheleleyo.
Le yiMaster Suite kwiflethi esanda kulungiswa kumbindi weSithili saseCastro. Ifakwe ngqo KWISItrato saseCastro kumbindi weSithili saseCastro, ukude nje ukude kuzo zonke iivenkile zalapha ekhaya, iivenkile zokutyela kunye neebhari. Ibhloko enye kude ne-Subway stop kunye ne-hub enkulu yokuhamba ukuya kuyo yonke iSan Francisco.
Ngegumbi lokuhlambela elikhulu kunye nendawo eninzi ye-closet eli ligumbi elihle lezibini njengesiseko sasekhaya kuhambo olude olusemantla eCalifornia okanye nawuphi na umhambi ofuna ubunewunewu kunye nobutofotofo bekhaya.
ISithili saseCastro esinamandla sisezinyaweni zakho. Ungaqala usuku lwakho ngekomityi yekofu ezantsi kwivenkile yekofu yasePhilz, uzulazule kwi-crosswalk yomnyama ukuze ubambe i-Posh Bagel, kwaye unyuke uye eHarvey Milk Plaza ukuya kubantu-bukela.
Eli likhaya lam apho ndihlala ixesha elizeleyo. Ndiphantse ndahlala ndikhona. Ndisebenza ekhaya kakhulu, kodwa ndithanda ukuhamba ngeeyure ezingaqhelekanga kuxhomekeke emsebenzini. Ndihlala ndifikeleleka naxa ndingekho ekhaya.
Inombolo yomthetho: STR-0003837
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R7989